Maitiro ekuvhara mabheti mukubheja kwepamhepo
Cosa shumirai vhara matanda kubheja online?
Mune technical jargon kuvhara bheji zvinoreva kuita kubheja kwechipiri, kunodaidzwa kunzi 'bheji bheji', iyo neimwe nzira inokutendera kuti udzore mari yawakaripira kuitira kuti usafungidzira mhedzisiro yawakabheja.
Iyo inonziwo seye 'parachuti' kubheja uye inowanzo shandiswa kuvhara dhiza kana chiitiko chekuti timu yekumba yaunobheja sewaunofarira isingahwine mutambo, pamwe ichitambura dhiza munguva yekukuvara.
Sei uchivhara mabheti pakubheja kwepamhepo?
Mubvunzo wakanaka. Muchokwadi, kana iwe watove kubheja chitsama paJuventus 'imba kukunda pa1,60 vachipesana, semuenzaniso, yepakati kana yepasi chinzvimbo timu, nei uchifanira kupa chimwezve chikamu cheakagara aripo kuhwina iwe wauchazopedzisira wawana?
Muchokwadi, kana kukunda kwaJuventus kwakatorwa pa1,60 nekushandisa fomula yekuvhara dhirowa yandambokuudza nezve ► qui - iyo yatinofungidzira kuti yakatorwa 3,6 - kana danda rako guru riri semuenzaniso makumi mashanu euros, iwe unofanirwa kubhejera imwe 50 euros kuti uzvifukidze iwe pachiitiko chetayi, kana kana zvinosuruvarisa kuti Juventus inotora pane kuhwina, iwe unodzoreredza zvese makumi mashanu Maeuro eiyo huru kubheja (main bheji) iyo iyo 19,23 euros yevhavha yekubheja (cover bheji), uye zviripachena haukunde chero chinhu.
Kana, pane kudaro, iwe ukahwina kubheja kukuru, zvisinei kubva mukukunda iwe unofanirwa kubvisa mutengo wakatarwa wekuvhara tayi uye unogona zvakare kufunga kuti pamwe, pasina kuomesa hupenyu hwako zvakanyanya, zvingave zvakakwana kubhejera zvakapetwa mukana 1-X pa1,11 .XNUMX uye kanganwa nezvazvo.
Tichifunga kuti math haisi maonero uye kuti kana ukadhonza gumbeze kune rimwe divi inopfupika kune rimwe, kana zano rako rekubheja richienderana nemhedzisiro imwechete uye uri kugona pane izvi fungidziro, saka unonyatso chengetedza kubheja kwako. zvaizovimbisa kudzoka kwakakwirira mukudyara kuitira kana ukahwina pane yejairika kubheja pane mukana wakapetwa.
Kutenda kune iyi software yekubheja pamhepo kwandakave nekodzero, hazvishamise Bet Shield, iwe uchave unokwanisa kuwana yakazara nhevedzano yedhata pane nhunzi kuti uite sarudzo inokwanisika uye vhara yako online yekubhejera kubhejera mune yakanakisa nzira.
Shandisa Bet Shield kuvhara kubhejera kwepamhepo
Ngatione nekukurumidza mashandisiro esoftware iyi kubheja kwepamhepo: muminda Match Odds iwe unofanirwa kuisa izvo zvipingaidzo izvo bookmaker zvinopa zvekupedzisira mhedzisiro 1-X-2.
Muminda iripazasi unofanirwa kusarudza iyo Kubheja kukuru (kubheja kukuru kunoitirwa sechiratidzo 1-X-2) uye iyo Shield Bet .
Kudzvanya bhatani Calc iwe unobva wakurumidza kuona kuti yakawanda sei kubheja paShield Bet kuti uzvifukidze iwe muchiitiko chekusahwina mhedzisiro yako Main Bet.
Mune iyo Statistics pani iwe yaunowana:
►Total Bet% Kubata: ingangove iri chikamu chekuti ungangove uchitenderedza nekubhejera kwako; mumuenzaniso uri pamusoro unenge uri 58% yechiratidzo 1 (Main Bet) pamwe ne25% yechiratidzo X, yehuwandu hwe83% yezviitiko zvinogona kuitika.
Izvi zvikamu Bet Shield anozviverenga mambure emutero inoshandiswa nebhuki, ivo vanofanirwa kumiririra mikana chaiyo yezviitiko.
►Net Units kuwana: mangani mayuniti aunowana kana iwe ukakunda iyo Main Bet.
►Net% kuwana: sezviri pamusoro, asi zvichitaurwa sepesenti.
►Net Units kurasikirwa / kuwana: zvakaenzana nemari yaunokunda kana kurasikirwa kana ukahwina iyo Shied Bet; ukoshi uhwu hunofanira kugara hwakawanda kana kushoma hwakaenzana neziro, nekuti kana iwe ukahwina iyo yechipiri bheji haukunde kana kurasikirwa nechinhu.
Kutenda ku Bet Shield saka iwe unozokwanisa zvirinani kubata mabheti ako aine kufukidza uye, wadii, zvakare sarudza kuvhara mabheti kunze kwekutora, kana zvirizvo, pachinzvimbo chekubheja pachiratidzo che1 uye kuzvifukidza pachiratidzo cheX, iwe unoda kuchinja kurongeka kwezvinhu, iwe unozoona kuti ... mhedzisiro inochinja!
Semuenzaniso, fungidzira (zvakafanana mutambo sepakutanga) kuti iwe unoda kubheja pane X chiratidzo uye uzvizvifukidze pachiratidzo che1, sezvaunoona Bet Shield inokuratidza kuti kubheja kwekuvhara kwakakwidzwa zvakadii (16,39 zviyero zvinopesana ne3,57 mune yapfuura kesi), asi zvakare goho rinoshanduka zvakanyanya, kutanga kubva pa18,64% kusvika pa43,99%!
Rova mutengesi neBet Shield
Nzira yekushandisa zvakanakisa iyi online kubheja software? Ini handizvibvumire kuti ndikuudze matambiro, ndinogona kungokuudza zvandingaite: sekunyora kwandakaita kare mune ino posvo, mukushayikwa kwekubatsira chaiko uye tichifunga nezvenguva yekufamba kwatinofamba (nguva pfupi), nzira chete yekukonzera kukanganisa kumutengesi ndeyekutamba nekukunda kufambira mberi.
Hazvina mhosva kuti sarudzo ndeipi, chinhu chakakosha kutamba zviitiko zvine mukana wakanyanya uye kudzosera matanda ese mukutamba nepfuti yega yega kudzamara chimwe chinangwa chasvika (mira kuhwina).
Kutenda ku Bet Shield iwe unogona zvakare kuverenga kubhejera kwako panguva yemutambo (live bets); inotamba semuenzaniso kana iwe ukaona kuti iwe unogona kuvhara zvinopfuura makumi mapfumbamwe muzana ezviitiko (Yese Kubheja Kubata) uchichengetedza 'Net% kuwana' yakakura kupfuura zero uye dzokorora zvese kudzamara wawedzera huwandu hwebheji yekutanga kana chinangwa kuti iwe umise iwe.
Iri izano rinosanganisira madiki madiki matanho, asi ini ndinokuvimbisa kuti zvese mune zvese zvinonakidza uye mushure mezvose usambokanganwa kuti miriyoni euro yakaumbwa nemazana emamiriyoni masendi! (iyo yechinyorwa inoenderana chaizvo nematani mazana maviri neshanu esimbi).
File Download	BShield.zip - 1 MB